မင်္ဂလာသက်တမ်း ၈ နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ ရင်ထဲကစကား | Duwun
ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က ပြည့်ခဲ့တာပါတဲ့။
ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ ဇနီးမောင်နှံက ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာပဲ မင်္ဂလာသက်တမ်း ၈ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်. အမှတ်တရ နေ့ရက်လေးအတွက် သူတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ရင်ထဲက စကားသံကိုလည်း အခုလို ပြောပြထားပါသေးတယ်.
Photo: အိန္ဒြာကျော်ဇင် ပေ့ချ်
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့မင်္ဂလာသက်တမ်းက ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာပဲ ၈ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်. လက်ရှိမှာလည်း သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ အားကျရတဲ့ အနုပညာရှင် မိသားစု ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး.
'' လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ် က ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ဒို့နှစ်ယောက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတယ်. Happy anniversary to the love of my life'' ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီခွဲက အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် သူတို့ မိသားစု ၄ ယောက် ရဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံကိုလည်း တင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်.
အဲ့ဒီနောက် ပြေတီဦးကလည်း သူတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် ညလေးမှာ ညစာအတူတူ စားဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီ ၄၇ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဆက်လက်ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်.
'' Anniversary ဆိုတော့ Ro ပြီကွာ..'' လို့ ရေးသားထားပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် ဇနီးချောလေး အိန္ဒြာကျော်ဇင် နဲ့ အတူ ညစာ စားနေကြတဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံကိုလည်း အတူတွဲ တင်ခဲ့ပါသေးတယ်. သူတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာလည်း အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်း နဲ့ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေက Comment ကနေတဆင့် ဂုဏ်ပြု စကားတွေ ပြောခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်.
ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ဟာ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၄)ရက်နေ့က လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။သမီးကြီးပြေသုဒြာကိုတော့ ၂၀၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ(၁၄)ရက်နေ့က မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သားငယ်လေးကိုတော့ ၂၀၁၅ခုနှစ်သြဂုတ်(၂၇)မှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ မိသားစုလေးကတော့ ပရိသတ်တွေ အားကျရတဲ့ အနုပညာရှင် မိသားစုလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ပြေတီဦး ရော. အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရော အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်. ပြေတီဦးကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပြီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ မိသားစုကို အချိန်ပိုပေးဖြစ်နေတာကြောင့် ဇာတ်ကားတွေကို စိစစ်ရွေးချယ် ရိုက်ကူး နေတယ်လို့ သိရပါတယ်.